Abafundi bakha ikhithi ene-Arduino ukudala izihlalo ezinamasondo zikagesi | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Sekuyizinyanga ezimbalwa, amaqembu amaningi nabasebenzisi bomenzi bebecwaninga futhi bethuthukisa ukuthi bangazakha kanjani izihlalo zikagesi ngeFree Hardware ukuze lokhu okusetshenziswayo, kwabaningi ababalulekile, kube yinto elula ukuyithola futhi engabizi njengoba kwenzeka manje.
Iqembu labafundi labiza u-steampunk1577 ukwazile ukwakha ikhithi ene-Arduino eguqula isihlalo esinamasondo esijwayelekile sibe isihlalo esinamasondo sikagesi, okuthile okuwusizo kakhulu kulabo abangakwazi ukufinyelela kulolu hlobo lwezinsiza.
Iqembu labafundi lisungule ikhithi ekwazi ukunamathiselwa kunoma yisiphi isihlalo sabakhubazekile futhi liyiguqule ibe yisihlalo esinamasondo sikagesi. Konke kwe- Amadola ka-500, intengo ebiza kakhulu kunezizihlalo ezinamasondo zeqiniso zikagesi, yize kungenzeka ukuthi zibiza kakhulu kunokuthi sizakhele thina
Ama-motors akule khithi aphrintiwe ukudala izihlalo ezinamasondo ezilula zikagesi
Le kit isekelwe ipuleti Arduino UNO elawula futhi isebenzise imiyalo yokunyakaza esiyinikezayo. Bese, Arduino UNO Ngenxa yamandla ebhetri, ihambisa izinjini eziphrintiwe esizibeka esihlalweni sabakhubazekile. Lawa ma-motors aphrintiwe njengazo zonke izingxenye ze-Free Hardware kanye namadivayisi akha le kit angatholwa ngokwehlukana kulabo abangabaphethe kahle futhi abafuna ukuzakhela bona. Kokubili ikhithi nayo yonke imininingwane mayelana nalesi kit se-Arduino ingatholakala nge Iwebhusayithi esemthethweni yeSteampunk1577.
Enye yezinzuzo noma amaphuzu amahle we-Free Hardware yi ukusetshenziswa kwayo ezintweni zansuku zonke noma ezidingekayo ngokuvamile ezinenani eliphakeme kakhulu kepha zingakhiwa ngezindleko eziphansi. Lesi sihlalo esinamasondo sikagesi siyisibonelo esihle kepha kunezinye ezifana nerimothi yesenzo sobuso, ama-prostheses aphrintiwe, njll. Okuthile okusiza abantu abaningi, noma ngabe thina asazi ngakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » I-Arduino » Abafundi bakha ikhithi ene-Arduino ukudala izihlalo ezinamasondo zikagesi
U-Alfredo Rodriguez Couto kusho
Ungathenga kanjani futhi kuphi. Ingabe kufanele ngiyifake ngokwami? Ingabe ingafakwa esihlalweni sabakhubazekile esigoqekayo?
Ngihlala e-Orense, SPAIN.
Phendula u-Alfredo Rodriguez Couto
I-RaspiReader, isifundi seminwe esisebenzisa iRaspberry Pi 3